10 Tips kuchengetedza mari pavaifamba | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Tips kuchengetedza mari pavaifamba
Ndiani haadi kuponesa mari kana zvichibvira? Kuenda kunogona kudhura, asi vatenge kwako nechitima tikiti chete Save A Train uye kuronga achibatsirwa yedu, unogona kuuya pasi madhuriro. Chengetedza mari pavaifamba pamwe izvi 10 mazano ari yako inotevera pazororo uye wako chikwama kuchaita kukutendai.
muromo 1: Book A Room With firiji And A microwave Or Kitchen Area
Kunyange zvazvo vamwe vanhu varege kuita kuti kubika paaiva zororo, kudya kudya chete pazuva nenguva 'musha' aigona kuponesa iwe mugomo. Wadii kunakidzwa kofi yakatarisana munhu itsva rwendo pasina kupenga kamuri webasa kubhadhara? Pane kuzvidya-mu mangwanani uye kwemasikati uye splurge pamusoro chinoshamisira chisvusvuro. A microwave uye firiji kuchavawo unobatsira reheating zvinosara!
muromo 2: Usati Book, Iva Achiziva Of The Location Of munogarepiko
Transportation anogona kuwedzera nekukurumidza, saka ungada kugara nechepakati nzvimbo. Mugshot nzvimbo kuti kure kure angaita isingadhuri asi iwe unenge chaizvoizvo kubhadhara pava paya. Zvakanakisa, bhuku kumwe unogona kufamba kwose kwose vachibva. Kwete chete uchawana kuona zvakawanda muguta uri, asi imi vo kuponesa mari pavaifamba.
muromo 3: Tarirai For City Tourism Cards To Save Money Nepo Rokufambira
Zvichienderana kadhi, unogona kuwana akasununguka kupinda kune pamusoro mushanyi zvinokwezva, discounts pa mumaresitorendi uye zvitoro, skip-the-mutsetse mikana pa vakabatikana zvinokwezva, vakasununguka zvifambiso, uye kunyange vakasununguka mumabhuku. Zvichienderana yako urongwa, zvingava zviripo mari.
muromo 4: Regai Get The Best Room
nguva yakawanda sei here iwe kuenda kupedza mukati mumba mako? Uchaita chete kuva vakarara ipapo? Ko unofanira pane kamuri yaiva zvakanaka maonero kana zvikuru zvimwe nzvimbo? iwe achashandisa Amenities, akadai mudziva kana gym kamuri? Ngatitaurei kuva vakatendeseka, zororo haisi nezvokuziva zvakakodzera! Saka bhuku kamuri rako akazochena uye kuchengetedza mari pavaifamba.
muromo 5: Kupedza nguva yakawanda mashoma Places And Muchaponesa Mari Kunyange Rokufambira
Tinoda nonoka kufamba. Chokwadi, zvakarurama ... tinoda zvinovaka kufamba. Panzvimbo mijaho kubva kumugumo mumwe munhu nyika kune imwe, kana kubvisa kuburikidza 6 nyika 6 mavhiki, kuziva nharaunda uri, tsime. Achienda chitima ndiyo nzira yakanakisisa yokuita izvi, sezvo uine nguva kutora zvose nzvimbo uye mifananidzo paunenge kuenda. Kunze mufaro kuushandisa nyore, basa Vols vakawandisa, bhazi nzendo, uye kutyaira madaro marefu unogona here kuchandidyira bhajeti yenyu. Saka zvishoma, tora zvakawanda, and discover all the cool free stuff.
muromo 6: Teverai On Social Media
Chengetedza mari pavaifamba napo "Vade" chaunofarira kufamba nzvimbo on Facebook uye "tevera" pamusoro Twitter. Nguva yakawanda zvakajairika kuti makambani kufamba kusunungura inopisa zveefa zvakananga kuburikidza yavo mumagariro nevezvenhau migero.
muromo 7: Newsletter Deals
Get vaitendawo kuti Angaswera shoma kuti pave mazita ano panzombe rinowanikwa pamambure kuti pamamiriro nguva. Heano edu iyezvino sarudzo kuti Angaswera kuponesa mari pavaifamba:
Travel Zoo - Subscribe kuti vhiki FREE mugwaronhau zvavo Top 20 zveefa - Shanduro kuti nyika dzakasiyana.
Deal Base - Sign up nokuti vakasununguka ngaakuitirei Alerts. Vane inotaura unadvertised rokutengesa uye inopa hamungambovi kuwana kumwe.
Lyon Airport kuenda kuSt Moritz Trains
muromo 8: Akabvarura An Apartment
Apartments ndiwo bhomba kuti mhuri kana avo kutsvaka mamwe mhenyu nzvimbo uye kicheni saka unogona kuponesa pasi chikafu. Airbnb ndizvo a good way to get low-cost vacation rentals and sublets from locals in 180 nyika.
muromo 9: Travel In Low Season
Kana uine rwokuramba kukwanisa kudzivisa urengarenga mwaka pakufamba, anobatirira pariri! Mitengo kusvetuka mudenga zvikuru panguva yemazororo chikoro. Uye hazvisi chete chirimo unofanira kudzivisa - usakanganwa kuti Isita, Kisimusi uye maviri nehafu yenguva mazororo vari zvakare kunge zvakawanda dhura. Vatariri isakafanira kuchareva isingadhuri chitima matikiti uye zvishoma takabatikana dzakasiyana - a takunda-zvisamumirira kuponesa mari pavaifamba!
Lyon Airport kuenda kuProvence Zvitima
Last mumwe: Tsvakai Free WI-FI To Save Mari Kunyange Rokufambira
Find wakasununguka WI-FI Mumaraibhurari uye cafes, saka imi regai Hammer mashoko ako. Uye kana uri kurova runhare musha kuwana kana zviri ichiri kunaya ikoko, usakanganwa kushandisa kusununguka mabasa akadai Skype kana Google!
Ko Tinobatsira Save Money Nepo Rokufambira?
Ngatizive kana isu akakubatsira kuponesa mari pavaifamba pamwe izvi 10 mazano. Taitofanira vanoda kuziva! Panguva iyi, kushanya Save A Train kuwana zvakanakisisa achibata ari chitima matikiti. No mari Yakavanzwa, hapana paine kupikisana kwakadaro! Just Train Travel!
Wagadzirira here izvi 10 Mazano kuponesa mari pavaifamba? bhuku kwenyu chitima matikiti zvino regai pachako kuparadzwa kuburikidza runako zvokufamba!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Tips kuchengetedza mari pavaifamba” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/tips-save-money-traveling/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
budgettravel europetravel moneysavingtips savemoney chitima mazano traveltips
chitima kufamba, Chitima pakufamba Belgium, Chitima kufamba France, Chitima kufamba Germany, Chitima kufamba Italy, Train Travel The Netherlands, chitima kufamba Mazano, Travel Europe
Business Travel nechitima, chitima mari, chitima kufamba Mazano